हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर कुन देशको कति ? – osnepal tv
हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर कुन देशको कति ?
काठमाडौं । आज आइतबार प्राय मलेसियन रिँगिट बाहेक सबै देशको मुल्य ओरालो लागेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ। अमेरीकी डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ ७१ र बिक्रिदर १४० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युएई दिराम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ६५ पैसा, बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार २९२ रुपैयाँ १३ पैसा छ भने बिक्रिदर २९३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । त्यस्तैगरी कुवेती दिनार एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ ९९ पैसा छ भने बिक्रिदर ३६४ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ ।
Previous article नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस नागढुङ्गामा जाँचका क्रममा… .
Next article Angola poses with her friend on their cot at The Expo
Angola poses with her friend on their cot at The Expo